Wepamusoro 5 Nzira dzeKungoerekana Wava Spammer
Muvhuro, Mbudzi 15, 2010 Monday, May 9, 2016 Robby Kuurayiwa
Pamusoro pekutuka kwakaipisisa iwe kwaunogona kugamuchira paInternet kupomedzerwa kuti uri spammer. Chero kumwe kurwiswa pahunhu hwako hakuna simba rakafanana rekugara. Pane mumwe munhu paanofunga kuti uri spammer, iwe unenge usingatombodzokere kudivi ravo rakanaka. Iyo nzira yeku spamville ndeimwe-nzira chete. Zvakaipisisa pane zvese, zvinoshamisa kuti zviri nyore kutora matanho ekuti uve spammer usingatombozviziva! Heano mashanu epamusoro